Spotify waxay ku dhawaaqeysaa inaad keydin karto waxyaabaha ku jira Apple Watch si aad u dhageysato "offline" | Waxaan ka socdaa mac
Spotify waxay ku dhawaaqeysaa inaad keydin karto waxyaabaha kujira Apple Watch si aad u dhageysato "offline"
Mid ka mid ah dhibaatooyinka isticmaalayaasha Apple Watch LTE waxay ahayd inuu awood u yeesho inuu dhagaysto muusikada aad jeceshahay ee 'Spotify' haddii aadan haysanin iPhone-kaaga. Haddii aad sameysay, waxay si toos ah ugu socotaa qulqulka, iyadoo la cunayo xogta u dhiganta koontadaada taleefanka.
Spotify ayaa hada ku dhawaaqday inaad si dhakhso leh u soo dejisan doonto waxyaabaha aad kahesho muusikada ee kaydinta ee Apple Watch, illaa iyo inta aad haysato koontada Premium, dabcan. Sidaa darteed, waad dhegeysan kartaa markasta oo aad rabto "offline", iyada oo aan loo baahnayn in lagu xidho shabakadda.
Shirkadda Spotify ayaa hal talaabo u qaaday macaamiisheeda Apple Watch. Hada laga bilaabo, haddii aad leedahay koonto cayiman Spotify, hadda waxaad kala soo bixi kartaa muusikada aad jeceshahay oo toos ugu keydin kartaa Apple Watch, si aad uga ciyaari karto saacadda markii aad rabto.
Waad keydin kartaa heesaha, album-yada, liisaska-liiska iyo boodhadhka keydinta saacadda Apple Watch, sidaas darteedna waad u ciyaari kartaa goor dambe «offline«.
Spotify ayaa sharaxday talaabooyinka loo raaci karo tan:
Raadi muusikada iyo boodhadhka aad rabto inaad ku soo dejiso saacaddaada.
Xullo liiska, albumka ama boodhadhka oo riix saddexda dhibic (…) oo dooro "Ku soo dejiso Apple Watch".
Si aad u hubiso horumarkaaga, u gudub qaybta "Soo degsashada" ee saacadda.
Marka liistada liiska, albums-ka, ama boodhadhka la soo dejiyo maktabaddaada, waxaad arki doontaa falaad yar oo cagaar ah oo ku xigta magacyadooda.
Ku xir dhegahaaga oo ku raaxee muusikada aad jeceshahay.
Xitaa haddii aadan laheyn wax xiriir internet ah oo ku saabsan Apple Watch, waxaad sidoo kale u isticmaali kartaa Siri inuu si toos ah uga ciyaaro heesaha barnaamijka, sida aad uga isticmaali karto iPhone-ka. Spotify wuxuu tilmaamayaa in dib udajinta khadka tooska ah ee Apple Watch ay noqon doonto tayo leh 96 kbps iyo in shaqeynta loo hirgaliyo dadka isticmaala si tartiib tartiib ah, inta lagu guda jiro toddobaadyada soo socda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Alaabada Apple » Apple Watch » Spotify waxay ku dhawaaqeysaa inaad keydin karto waxyaabaha kujira Apple Watch si aad u dhageysato "offline"
Nomad wuxuu soo saarayaa silsilado cusub oo titanium ah iyo bir bir ah